Global Voices teny Malagasy » Repoblika Dominikana: Manampy An’i Haiti Mpifanolo-bodirindrina Taorian’ny Horohorontany · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Marsa 2018 3:00 GMT 1	 · Mpanoratra Rocio Diaz Nandika Miranah
Sokajy: Amerika Latina, Karaiba, Haiti, Repoblika Dominikana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Voina, Vonjy Voina, Resadresaka Hanatsarana ny Tany
Tamin'ny 5:53 hariva tamin'ny talata 12 janoary 2010 tao amin'ny nosy Hispaniola , nahatsiaro fanina tampoka ny vahoaka satria nihovotrovotra ny tany. Mamely ny horohorontany tamin'izay fotoana izay. Tsy nisy afa-tsy ny tahotra lehibe tao amin'ny Repoblika Dominikanina. Na izany aza, tao Haiti mpifanolo-bodirindrina, izay nisy ny foiben'ny horohorontany, faharavàna tanteraka no nisy satria nahatratra 7.0 tamin'ny maridrefy Richter ny horohorontany. Vao mainka niharatsy ny toe-javatra satria efa ho 6 maily (10 kilaometatra) ambanin'ny tany ny horohorontany, mahatonga ny fahasimbana ho goavana kokoa. Mamaritra io fotoana io tamin'ireto teny ireto ilay bilaogera Dominikana Alf Micstar ao amin'ny Duarte 101 [es]:
Vokatry ny horohorontany tao amin'ny Repoblika Dominikanina, napetraka ny fanairana ny mety hisian'ny tsunami, ary nanakatona ny kianja ara-barotra tao an-drenivohitra Santo Domingo ny Vaomieran'ny Hetsika Vonjy Taitra (Emergency Operations Commission, COE) ary nandray fepetra tany amin'ireo faritra amoron-dranomasina sy tany amin'ny sisintanin'i Haïti. Ny ampitso vao maraina, niantso fivoriana vonjimaika ny filoham-pirenena Dominikana Leonel Fernández mba hametraka Komitin'ny Fanampiana ho an'i Haiti, izay ahitana fanampiana ho an'ny fahasalamana, rano, herinaratra, foto-drafitrasa, ary ny fanampian'ny miaramila .
Joan Guerrero  ao amin'ny Duarte 101 [es] mamintina ny hetsika:
Nanampy nandefa sakafo sy rano amin'ny tavoahangy ny ekipa Dominikana, ary nandefa traktera mba hanalàna ireo korotan-trano rava. Nampiasaina ny hopitaly ao amin'ny faritanin'i Barahona , sy ny seranam-piaramanidina mba handraisana fanampiana izay hozaraina any Haïti. Nanampy olona maratra maherin'ny 2 000 ny mpiasa avy ao amin'ny COE ary nanampy tamin'ny famerenana ny tolotra finday ny Ivon-toeram-pifandraisan-davitra Dominikana (Indotel). Nandrindra ny tolotra fanampiana ara-pahasalamana ny Vokovoko Mena Dominikanina sy ny Vokovoko Mena Iraisam-pirenena. Toeram-piantsonana ho an'ireo mpitati-baovao vahiny izay tonga hitantara ny zava-misy ihany koa ny Repoblika Dominikanina.
Ankoatra ny ezaky ny governemanta, Dominikana maro no nanatevin-daharana ny hetsika miaraka amin'ireo foibe fanangonana fanampiana, ny hafa kosa nanome fiaramanidina manokana sy fitaovana hafa ho an'i Haiti. Duarte 101 [es] manoratra famintinana fohy momba ny fanampiana ilaina sy ny toeram-panangonana fanampiana manerana ny Repoblika Dominikana .
José Rafael Sosa mamintina hoe [es] :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/03/26/116552/
 nosy Hispaniola: http://en.wikipedia.org/wiki/Hispaniola
 Mamaritra io fotoana io tamin'ireto teny ireto : http://duarte101.com/2010/01/13/nosotros-tambien-lo-sentimos
 niantso fivoriana vonjimaika : http://www.elnacional.com.do/nacional/2010/1/14/36880/La-ayuda-para-Haiti-ha-sido-masiva
 fanampiana ho an'ny fahasalamana, rano, herinaratra, foto-drafitrasa, ary ny fanampian'ny miaramila: http://www.diariolibre.com/noticias_det.php?id=230762
 manoratra famintinana fohy momba ny fanampiana ilaina sy ny toeram-panangonana fanampiana manerana ny Repoblika Dominikana: http://duarte101.com/2010/01/13/como-ayudar-a-haiti
 mamintina hoe [es]: http://josersosa.blogspot.com/2010/01/si-quiere-ayudar-haiti.html